Saafi Films - News: Madaxweynaha Soomaaliya oo War cad kasoo saaray sida uu u arko in Soomaaliya xiligan laga qaado Cunaqabateynta Hubka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sida ugu wanaagsan usoo dhaweynayaa go�aanka Golaha Amaanka ee Qaramada midoobay eek u aadan ka qaadista cunuqabeteynta hubka ee laga qaaday Dowladda Soomaaliya .
Madaxweynaha Xassan Sh. �Waxaa jirto xisaabtan iyo masuuliyad la socota go�aankaas.Golaha Amaanka Go�aankooda wuxuu si sax ah ula socdaa isbedelka cusub ee siyasadeed ee ka jira Soomaaliya.� Cunuqabateyntan ayaa Golaha Amaanka si qeyb ah uga qaadeen Dowladda Soomaaliya.
�Kumanaan Ciidamadda Xooga Dalka oo ay soo tababreen dalalka aan saaxibada nahay ayaa Soomaaliya dib ugu soo laabtay, nasiib daro qalab la�aan ayaa caqabad ku noqotay si ay howshooda u gutaan . Ciidamadaan ayaa si wada jir ah howlaha amniga ula fuliyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM�
�Dowladda waxey u mahad celineysaa Golaha Amniga , qadarintooda iyo fahamkooda,waxeyna Dowladda Soomaaliya masuuliyad iska saareysaa dhamaan sharciyadda iyo sharuudaha la socda go�aanka Golaha Amniga ay gareen, si waafaqsan nidaamka, kuna dhisan hufnaan�
Ugu danbeyntii Madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay ka qeyb qaatan dib- u dhiska dalkooda. �Talaabadan ayaa ah guul usoo hoyatay dhamaan Shacabka iyo Dowladda Soomaaliyo�.
4,545,129 unique visits